HomeIZAO TONTOLO IZAOEOROPEANINA48 Polonina
Polisy any Aotrisy ary fiara fitaterana an-dalamby
Budimex Budownictwo sy PKP Làlamby lalamby poloney PKP dia nanao sonia fifanarahana mendrika € 324 tapitrisa (1.4 miliara PLN) ho fanavaozana ny Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - tsipika Zabrzeg any Silesia. Tetikasa, lalamby 47 km [More ...]
24-27 Septambra 2019 eo amin'ny TRACON Rail Torkia-Polonina fampirantiana sy ny fifandraisana ara-barotra nandritra ny fitsidihana nataoko momba ny asa sy ny taxes nanao fampiasam-bola ao amin'ny lalamby Gdanski Polonina rafitra no aseho eto ambany. EU [More ...]
Ny Intermodal dia horesahina ao amin'ny RailFreight Summit ao amin'ny New Silk Road
Nandritra ny fihaonambe RailFreight, nihaona hiresaka momba ny fifandraisana New Silk Road, Polonina ary làlana mifono entana hafa ao amin'ny faritra ny mpitarika ny lalamby. Silky vaovao nandritra ny Fihaonambe RailFreight any 15 sy 16 Mey tao Gdansk, Polonina [More ...]
Novana ny lalamby Polonina Belarosiana Polonina
Nanao sonia fifanarahana miaraka amin'ny Intop - Torkol - Rajbud Consortium ho an'ny fanavaozana ny zotra Podkarpackie - Chryzanów amin'ny vola 32,3 tapitrisa (138 tapitrisa PLN) ny làlambe Railway Poloney. Ity lalamby ity dia hita any amin'ny ilany atsinanan'ny firenena any Belarus [More ...]
Tany Polonina, nisintona ny fiara mpamonjy voina ny fiaran-dalamby
Tamin'ny fiampitana iray tao an-tanànan'i Puszczykowo any Poznan, Polonina, nisy fiara mpamonjy voina iray nianjera tamin'ny lamasinina, ary ny kodiarana tao aoriana dia nijanona teo amin'ny lalamby. Tao Puszczykowo no niseho ny loza, tany amin'ny faritr'i Poznan any Polonina. fiara mpitondra marary [More ...]
Anadolu Isuzu mankany amin'ny fiainana novokarin'ny Poloney Novociti
Anadolu Isuzu, dia nidina haingana ho tonga marika bus manerantany, nanolotra ny fiainana 24 Isuzu Novociti Life ho any Lodz, Poland. Anadolu Isuzu dia manohy ny fitomboan'izy ireo amin'ny tsenan'ny fanondranana miaraka amin'ny fandefasana azy ary ny fandresena. [More ...]
Gülermak hanangana ny tunnel Road 3.2 km any Polonina
Gülermak, orinasa mpanamboatra Tiorka (indrindra ny zaridainan'ny tany faharoa tany Warsaw), izay nanao anarana ho azy tany Polonina misy tetikasa tena matotra sy mahomby, ary ny fantsona 3200 metatra eo anelanelan'ny nosin'i Uznam sy Wolin miaraka amin'ny tetik'asa vaovao. [More ...]
Vaovao manokana - Hyundai Rotem 231, fangatahana tsara indrindra ho an'ny malemy ho an'ny orinasa Poloney Warsaw Tramway izay tantanin'ny Kaomin de Warsaw, dia nahazo ny famatsiana fiara tram-by ambany. atsimo [More ...]
Durmazlaramin'ny National Tram Panorama, Polonina
Ny mpanamboatra tramany 7 tram Bursa Durmazlarhanao ny fanondranana voalohany azy ho mpikambana mpikambana ao amin'ny Vondron'olona Eropeana i Poland. Amin'ny dingana voalohany, ny trondro 12 'Panorama' dia hiasa eny an-dalamben'i Olsztyn. Bursalı DurmazlarTiorkia indizeny voalohany tram an'i Polonina [More ...]
Tany Polonina, nanidina metatra maromaro ilay tovovavy namelezan'ny lamasinina iray
Zazavavy tanora te-hiampita amin'ny arabe amin'ny alàlan'ny fiampitana ao Polonina, dia naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Nisy lozam-pifamoivoizana nahatsiravina tany Polonina. Fiaran-dalamby mandia haavo [More ...]
Tafandria tsy nahitam-bokatra no tsy nahatsikaritra, ny fahafatesana dia nigadona (Video)
Rehefa manaka ny haingam-pandeha, nivadika ny fiara ary tsy nahatsikaritra ny sakana miakatra amin'ny haavony. Ny mpamily ny fiara sy ny namany 3 dia velona tamin'ny fahasamihafana amin'ny santimetatra. Any Polonina, fiampitana amin'ny haavo [More ...]
Manitatra ny serivisy fiaramanidina Sino-eoropeana ny UPS: Ny tanàna nanampy ny tsipika China sy Eropa dia manome ny fidirana feno kokoa ny UPS amin'ny safidy fandefasana hafa ho an'ny mpanjifa UPS (NYSE: UPS) ankehitriny eo anelanelan'i Eropa sy i Shina [More ...]
Vondrona Eoropeana hanohana ny tetikasa fanitarana metro ao Varsovie
Fanohanana avy amin'ny Vondrona eoropeana mankany amin'ny tetikasan'ny fanitarana any metro Warsaw: Ny Vaomiera eropeana dia hampiasa vola 432 tapitrisa Euros amin'ny tetikasan'ny fanitarana metro any Warsaw, mifanaraka amin'ny lasam-pahefana momba ny famoahana ny angovo Energy Union. [More ...]
Ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny fiara dia manalefaka
Mihamangatsiaka ny fifaninanana amin'ny lamasinina: orinasa alefan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fiaramanidina alemana. Ireo lalamby haingam-pandeha, izay lasa mpifaninana amin'ny fitsanginan-drivotra, tsy hifaninana amin'ny haingam-pandeha ihany fa amin'ny fampiononana ihany koa. Eoropa [More ...]
Nofehezin'ny tafika nazi volamena tany Polonina
Fiaran-dalamby poloney feno haingo volamena: Nazia tany Polonina mba hahita fiaran-dalamby feno volamena, firavaka ary fitaovam-piadiana inoana fa nafenina talohan'ny nidiran'ny Sovietika tany Polonina tamin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa [More ...]
1 segondra alohan'ny mively ny fiaran-dalamby (Video)
1 segondra talohan'ny famonoana ny kamiao fiarandalamby: tany Polonina, ny mekanika izay nahatsikaritra ilay kamiao tsy nahatratra ny fiampitana làlan-kaleha dia nanao ezaka mafy nampitandremana ireo mpandeha ny fifandonana. Nandeha fiarandalamby ny fiarandalamby [More ...]
Vehivavy nalemy dia nijanona teo ambanin'ny fiara
Vehivavy mavitrika nikatona tao ambanin'ny kamiao: tany Polonina ilay vehivavy te-hiampita ny làlamby dia nandoa vola bebe kokoa noho ny fahatsiarovany zavatra. Any Polonina, ny vehivavy te-handalo ny lalam-by, ny vidin'ny fisainana [More ...]
Orinasa Poloney mba Hanamboatra ny Pesa Metro Train
Ny orinasa poloney Pesa dia hamoaka Metro Train: nanambara i Pesa mpanamboatra fiaran-dalamby fa hamokatra fiaran-dalamby ry metro. Avy amin'ny 24 tapitrisa zloty ao amin'ny foibe fikarohana sy fampandrosoana any Poloney ho an'ny fiaran-dalamby [More ...]
Mikasa ny hampitombo ny Metro Warsaw
Drafitra fanitarana any Warsaw Metro: Nanambara ny tetika hanitatra ny metro Warsaw ny Tale Jeneralin'ny Warsaw any amin'ny tany Warsaw. Niresaka tamin'ny fihaonambe Iraisam-pirenena 2016 Railway, Jerzy Lejk tao amin'ny Lalamby Warsaw [More ...]
Belarosiana Belarosiana Vola Vola Azon'ny Vola Polisy Pesa
Fiaran-dalamby Belarus nividy lamasinina avy amin'ny orinasa poloney Pesa: fifanarahana vaovao nosoniavina miaraka amin'ny mpamokatra garaziana Poloney Pojadzy Szynowe Pesa Bydgoszcz (PESA). Araka ny fifanarahana 4 unit ho an'ny Pesa, Railway Belarus [More ...]